Japana: Ilazao Izao Tontolo Izao Mba Hanampy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2011 16:49 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Italiano, Português, Français, 繁體中文, 简体中文, polski, Shqip, Español, Swahili, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataony momba ny Horohorontany Japana 2011.
Tadiavo ny teny hoe “宮城” (Miyagi) fa dia sary maro samihafa no hiakatra mikasika io prefecture io, iray amin'ireo tena voadona mafy tokoa tao Japana tamin'ilay tsunami farany teo. Akorisaho midina, dia hisy sary iray hiavaka, boribory kely toa vongan-dranonando miloko volontany sy manga mandram-panapotsitrao azy …
… hamoaka faritra midadasika toy ny tany voaasa. Io sisa no niafaran'i Kesennuma, tanàna kely iray, nahitàna olona an'aliny tany aloha tany.
Vakio ny teny fampahafantarana, dia hisy tantara hivoaka avy amin'ny fitantaràn'ny olona iray nonina tao an-tanàna. Io olona io no nandefa ny sary taminà namany iray, Cherie, any Sydney, izay nandefa ilay sary sy mailaka tao amin'ny aterineto. Hoy ny vakin'ilay hafatra:
Cherie dia manampy teny fohy ery amin'ny faran'ilay teny fampahafantarana: